अब मेनपावरले लामो समय सम्म पासपोर्ट ‘होल्ड’ राख्ने मेनपावरलाई ३ वर्ष जेल सजाय र लाख रुपैयाँ जरिवाना जानकारिको लागि शेयर गर्नु होस - Daily Gorkhali
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अब मेनपावरले लामो समय सम्म पासपोर्ट ‘होल्ड’ राख्ने मेनपावरलाई ३ वर्ष जेल सजाय र लाख रुपैयाँ जरिवाना जानकारिको लागि शेयर गर्नु होस
काठमाडौँ  । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले राहदानीसम्बन्धी कानुन संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।नया व्यबस्था लागु भएसंगै अब वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा कामदारको राहदानी लामो समय ‘होल्ड’ गरिरहने तर काम नगर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने भएको छ ।
हालसम्म ५६ लाख राहदानी जारी भएको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री मन्त्री राम बहादुर थापाले राहदानीलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न नयाँ विधेयक आएको बताए । राहदानी बनाउन विभागमा निवेदनसहित पेस गरिएको निजी विवरणको कागजपत्रसमेत अब विभागले १२ वर्षसम्म अभिलेख राख्ने भएको छ ।
राहदानी जारी भएको मितिले १२ वर्षपछि मात्रै नष्ट गर्न सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ । यस्ता व्यक्तिगत विवरण प्रशोधन गरी कम्प्युटराइज्डसमेत गरिने भएको छ ।यो विधेयक पारित भएसंगै म्यानपावर व्यबसायीले अब कामदारको अनुमति बिना राहदानी राख्न पाउने छैनन् ।
यो पनि पढ्नु होस:-एजेन्सी, २ जेठ । फर्निचर घाममा राखेको भन्दै साउदीमा महिला घरेलु कामदारलाई मालिकले यसरी रुखमा बाँधेर सजाय दिए ! साउदी अरबमा एक जना महिला घरेलु कामदारलाई रुखमा बाँधेर यातना दिइएको छ ।फिलिपिन्सकी २६ वर्षे लभ्ली अकोस्टा बारुइलोलाई फर्निचर घाममा राखेको भन्दै रुखमा बाँधेर यातना दिइएको हो ।
साउदी अरबको रियादस्थित एक सम्पन्न परिवारकी घरेलु कामदार हुन् । उनी केही महिनादेखि त्यहाँ काम गरिरहेकी थिइन् । तर काठको एउटा निकै महँगो वस्तु घाममा राखेका कारण उनी सजायको भागीदार हुनुपर्यो । घामले उक्त महँगो वस्तुलाई बिगारिदिने भन्दै उनका बुढा मालिक निकै रिसाएका थिए ।
फिलिपिन्सका एकजना साथीले गत मे ९ मा लभ्लीलाई घरको आँगनको रुखमा बाँधिएको तस्बिर खिचिन् र इन्टरनेटमा अपलोड गरिन् । उनका अनुसार घरको काम बिगार्दा कस्तो सजाय पाइन्छ भनेर यस्तो सजाय दिइएको थियो ।
फिलिपिन्स डिपार्टमेन्ट अफ फरेन अफेयर्स (डिएफए) का अनुसार उक्त घटनाको जानकारीपश्चात् दुई सन्तानकी आमालाई घर फिर्ता पठाइएको छ ।डिएफएका प्रवक्ताले भने, ‘लभ्ली अकोस्टा बारुइलो साउदी अरबबाट मे ९, २०१९ मा बेलुका ८ः५५ मा मनिला पुगिसकेकी छिन् ।’
लभ्लीसँगै काम गर्ने एक महिलाले सहयोगको याचना गर्दै थोरै काम बिगार्दा पनि मालिकले अत्यधिक सजाय दिने गरेको बताइन् । लभ्ली अहिले फिलिपिन्सको ला युनियनस्थित आफ्नो घरमा छिन् ।
यसबारे कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘मलाई त्यहाँबाट निस्कन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यहाँ बाँकी भएका अन्य फिलिपिनोलाई पनि सहयोग गर्न अपिल गर्छु । उनीहरुले नै मलाई सहयोग गरेका हुन् र मेरो फोटो अपलोड गरेका हुन् । म उनीहरुको सुरक्षाप्रति चिन्तित छु । उनीहरुको पनि उद्धार होस् भन्ने चाहन्छु ।’
टुँडीखेलमा सेनाले तोप पड्काउँदा विश्वको सातो गयो, नेपालले शक्ति देखाउँदा सारा दुनियाँको यस्तो हालत…हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
किर्तिपुरमा छ जे माग्यो त्यही पुर्याउँने शक्तिपीठ ! सक्दाे शेयर गराै तपाईकाे मनाेकामना पुरा हुनेछ
कलाकार समाजसेवी सिताराम कट्टेल (धुर्मुस)राहत लिएर बारा पुगे…..
भर्खरै चितवनमा बाट आयो यस्तो दुखद खबर